Sidee Madaxweyne Farmaajo Loogu Soo Dhoweeyey New York? – Goobjoog News
Wafdi uu hoggaaminayo madaxwaynaha dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa gaaray magaalada New york ee dalka Maraykanka,halkasi oo lagu soo dhaweeyay.
Madaxweynaha ayaa magaalada New york kaga qaybgalaya shirka sanad laha ah golaha guud ee Jimciyadda quruumaha ka dhexeysa. meertadiisa 74-aad ee ,kaasi oo looga hadlayo arrimo badan oo quseeya Caalamka,waana
Farmaajo ayaa madaxda ka qaybgalaysa shirkaasi uga warbixindoona arrimaha Soomaaliya,iyo guud ahaan horumarka ay ku talaabsanayso Soomaaliya.
Sidoo kale wuxuu kulammo doceedyo la yeelan doonaa madaxda ka qaybgalaysa shirkaasi,si ay uga wada hadlaan xoojinta xiriirka Soomaaliya uu kala dhaxeeyo dowladaha kale ee dunida oo hoggaamiyaashooda shirkaasi ka qaybgalaya.